के अव कोरोना परिक्षण गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ? मन्त्रालयबाट आयो यस्तो सूचना — Motivatenews.Com
के अव कोरोना परिक्षण गर्दा १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ? मन्त्रालयबाट आयो यस्तो सूचना
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्न चाहनेलाई शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पिसिआर परीक्षण गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुल्क लिन पाउने बताएका हुन्।
मन्त्रालयले परीक्षणको कति शुल्क लाग्नेबारे तोकेको छैन। साथै कार्यविधि तयार नभएकाले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मन्त्रालय नै ‘अलमल’मा छ।शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्नेबारे आमनागरिकले आलोचना गरिरहेका छन्। तर मन्त्रालयले परीक्षणको शुल्क सबैलाई नलाग्ने बताएको छ।
‘सबैलाई शुल्क लिने कुरा गलत हो। जसले आवश्यक नपर्ने भए पनि आफू ढुक्क हुनलाई परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई शुल्क लिने भनेको हो,’ मन्त्रालयलका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, ‘तर बाहिर सबैलाई शुल्क लाग्ने भनेर गलत प्रचार भयो।’
यसअघि पनि सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। तर पिसिआर परीक्षण गर्नलाई निजी अस्पतालहरूलाई अनुमति नदिएको अधिकारीको भनाई छ ।
‘पिसिआर गर्ने पनि अहिले हामीसँग भएका १९ वटै प्रयोगशालाले गर्ने हो। निजी अस्पतालहरूले गर्ने भनेको हैन,’ उनले भने। शुल्क लिएर पिसिआर परीक्षण गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड लागू हुनेछ। यसमा थप काम अघि नबढेको भन्दै एउटा छुट्टै निर्देशिका आवश्यक रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।
उनले पनि पिसिआर परीक्षणको शुल्क सबैलाई नलाग्ने बताइन्। लक्षण नभएका र संक्रमित व्यक्ति वा ठाउँको सम्पर्कमा नपुगेकाहरूलाई मात्र शुल्क लिन खोजिएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक संजालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई १५ हजार रुपैँया लिएर परिक्षण गर्न दिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
अनौठो तरिकाले भागे मुकेश चौरसियाका हत्यारा तिवारी, प्रहरीले भगाएको ओरोप
ओली–प्रचण्ड बार्ता : प्रचण्डको अडानले ओलीलाई रुनु न हाँस्नु, अब के हुन्छ ?
११ दिनपछि ओली – प्रचण्ड बार्ता, के – के भयो सहमति ?
उत्तर कोरियाका नेता ‘किम जोन उन’को भित्री रहस्य खुल्यो, श्रीमतीलाई कडा कानुन, खान्छन् ३ करोड डलरको रक्सी
प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड, यसरी हुँदैछ तयारी
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ खातामा, कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
नेपाल बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?